PacketZoom's Mobile Expresslane CDN sooro Amazon Cloudfront | Martech Zone
Ihe ngwugwu, ụlọ ọrụ na-emeziwanye ngwa ngwa ekwentị site na teknụzụ ịkparịta ụka mkpanaka na ngwa, kwupụtara mmekọrịta na Amazon CloudFront ịgụnye CloudFront na ọrụ PacketZoom nke Mobile Expresslane. Ngwakọta azịza ahụ na-enye ndị mmepe ngwa mkpanaka nke mbụ na naanị ikpo okwu mkpanaka maka mkpa ọrụ arụmọrụ ha niile.
Ọ bụ nke mbụ na-na-otu mobile n'elu ikpo okwu na-agwa niile arụmọrụ mkpa n'ihi na mobile ngwa ọdịnala - mmesho, ikpeazụ-mile arụmọrụ, na n'etiti-mile arụmọrụ. Isi ihe nke ọrụ ahụ gụnyere:
PacketZoom si Mobile Expresslane na-agba ọsọ ngwa ngwa site na 3x na azọpụta ruo 90% nke njikọ netwọk maka ndị nkwusa ngwà gụnyere Glu, Sephora, Photofy, Upwork na ndị ọzọ.
Site na mmekorita ya na CloudFront's Web CDN, PacketZoom na Amazon ghọrọ ndị izizi na-enye ngwanrọ ịkparịta ụka ngwanrọ na njedebe.
Tinyere PacketZoom ngagharị ikpeazụ nke mobile mobile, ndị ahịa na-enweta ezigbo ngwọta nnyefe ngwa mkpanaka.
Ndị ahịa PacketZoom ndị na-ebugharị Amazon CloudFront na mba dị iche iche gụnyere Glu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), na Belcorp (Latin America).
PacketZoom bụ onye ndu na ngwa ngwangwa nke ngwa mkpanaka ya na teknụzụ Mobile Expresslane, nke na-agbalite ngwa ngwa mkpanaka site na 3x ma napụta 90% nke njikọ netwọk maka ndị na-ebipụta ngwa mkpanaka gụnyere Glu, Sephora, Photofy, Upwork na ndị ọzọ. Ihe ngwugwu eme ka ahụmịhe onye ọrụ na-emewanyewanye na ngwa ngwa mkpanaka site na iwepu mgbochi ụzọ arụmọrụ na mile ikpeazụ. Igwe okwu mkpanaka ya na-enye akụrụngwa zuru oke, na njedebe maka Mobile App Performance Management & Optimization (APMO).
CloudFront Web CDN ngwọta Amazon nwere oke ahịa kesara n'etiti ndị na-ebipụta ngwa ekwentị. Ọ na-echekwa ọdịnaya site na njikarịcha nnyefe n'etiti etiti. Tinyere ngwugwu ihe eji eme njem ugbua nke PacketZoom, ndi ahia n’agha nweta ezigbo ihe ngba nghari nke nghota.
Anyị nwere obi ụtọ ịnye ụwa kachasị mma: Amazon CloudFront - CDN kachasị ewu ewu n'etiti ndị mmepe mkpanaka - yana PacketZoom Mobile Expresslane - ihe ngwangwa ngwangwa nke ngwanrọ. Ọ bụụrụ anyị mgbanwe sitere n'okike maka ngwaahịa, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eji CloudFront. Shlomi Gian, Onye isi oche PacketZoom
PacketZoom na-akọwapụta arụmọrụ mkpanaka site na teknụzụ ịkparịta ụka n'appntanet. Ezubere ya maka ngwa ngwa mkpanaka nke ala, ngwugwu mkpanaka PacketZoom na-enye ndị mmepe ngwa ngwa ikike iji bulie arụmọrụ ngwa ngwa na ezigbo oge. PacketZoom na - eme ka ahụmịhe onye ọrụ rụọ ọrụ na ngwa ngwa mkpanaka site na iwepu mgbochi ụzọ arụmọrụ na ngagharị ikpeazụ nke ekwentị, na - agbatị ọsọ ọsọ site na ihe ruru 3x, na - echekwa ihe ruru 90% nke nnọkọ site na njikọ TCP ma belata ụgwọ CDN. Maka ozi ndị ọzọ gaa na Ihe ngwugwu
Tags: amazon Cloudfrontbelcorpcdnigwe ojiigluu mkpanakapacketzoomzuru oke corpPhotofyarụ ọrụ